Ukuxoshwa | Law & More B.V.
Blog » Ukuxoshwa
Ukuxoshwa kungenye yezinyathelo ezifinyeleleka kakhulu emthethweni wokuqashwa onemiphumela efinyelela kude kusisebenzi. Kungakho wena njengomqashi, ngokungafani nomsebenzi, ungeke wakubiza nje ngokuthi akushiye. Ngabe uhlose ukuxosha isisebenzi sakho? Uma kunjalo, kufanele ukhumbule izimo ezithile zokuxoshwa okuvumelekile. Okokuqala, kubalulekile ukunquma ukuthi ngabe umsebenzi ohlose ukumxosha usesimweni esikhethekile. Abasebenzi abanjalo bayakujabulela ukuvikelwa kokuxoshwa. Ungafunda ngemiphumela yakho njengomqashi esizeni sethu: Ukuxoshwa.site.
Izizathu zokuxoshwa emsebenzini
Kumele futhi ususe ukuxoshwa kwesisebenzi sakho ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo:
ukuxoshwa kwezomnotho uma umsebenzi owodwa noma eminingi izolahleka;
ukungakwazi ukusebenza isikhathi eside uma isisebenzi sakho sigula noma singakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo iminyaka emibili noma ngaphezulu;
ukungasebenzi kahle lapho ungakhombisa ngokugqugquzela ukuthi isisebenzi sakho asikufanelekeli ukwenza imisebenzi yaso;
ukwenza ngokungenacala noma ukweqiwa lapho umsebenzi wakho eziphatha (ngokujulile) ngokungenacala emsebenzini;
kuphazamise ubudlelwano bokuqashwa uma ukubuyiselwa kobudlelwano bokuqashwa kungenzeki futhi ukuxoshwa akunakugwenywa;
ukungayi emsebenzini njalo uma umsebenzi wakho engezi njalo emsebenzini, egula noma ekhubazekile, futhi lokhu kunemiphumela engamukeleki ekusebenzeni kwakho kwezebhizinisi;
ukuxoshwa ngenxa yezizathu ezisele uma izimo zinjalo ukuthi akunangqondo kuwe njengomqashi ukuvumela inkontileka nomsebenzi wakho ukuthi iqhubeke;
ukwenqaba ukusebenza ngenxa kanembeza lapho uhlale etafuleni nomsebenzi wakho futhi senifikile esiphethweni sokuthi umsebenzi awukwazi ukwenziwa ngendlela eguquliwe futhi ukwabelwa kabusha akuyona inkinga.
Kusukela ngomhlaka 1 Januwari 2020, umthetho unezizathu ezengeziwe zokuxoshwa, okungukuthi inhlabathi eqoqekayo. Lokhu kusho ukuthi nawe njengomqashi ungamxosha umqashwa wakho uma izimo zezizathu ezithile zokuxoshwa zikunikeza isizathu esanele sokwenza kanjalo. Kodwa-ke, njengomqashi, akumele ubeke kuphela isinqumo sakho sokuxoshwa kwesinye sezizathu zomthetho ezibalwe ngenhla, kodwa futhi ufakazele futhi ukufakazele ukuthi kukhona. Ukukhethwa kwesizathu esithile sokuxoshwa kuhlanganisa nenqubo ethile yokuxoshwa.
Ingabe ukhetha i- ukuxoshwa emsebenzini ngenxa yezizathu zebhizinisi noma ukungakwazi ukusebenza (idlula iminyaka emi-2)? Uma kunjalo, wena njengomqashi kufanele ufake isicelo semvume yokuxoshwa ku-UWV. Ukuze ufanelekele imvume enjalo, kufanele ushukumise kahle isizathu sokuxoshwa kwesisebenzi sakho. Isisebenzi sakho sizoba nethuba lokuzivikela kulokhu. I-UWV bese inquma ukuthi umsebenzi angaxoshwa noma cha. Uma i-UWV inika imvume yokuxoshwa futhi umsebenzi wakho engavumi, umsebenzi wakho angathumela isikhalazo enkantolo yesifunda. Uma owokugcina ethola ukuthi umsebenzi unelungelo, iNkantolo yesiFunda inganquma ukubuyisela inkontileka yokuqashwa noma ukunikeza isinxephezelo sakho.
Ngabe uzo ukuxosha ngenxa yezizathu zomuntu siqu? Ngemuva kwalokho indlela yenkantolo yesifunda esincane kufanele ilandelwe. Akuyona indlela elula le. Njengomqashi, kufanele ngabe wakhe ifayela elibanzi ngesisekelo salo lapho kungakhonjiswa khona ukuthi ukuxoshwa ukuphela kwendlela. Kungaleso sikhathi kuphela lapho inkantolo izokunikeza imvume yesicelo sokuqeda isivumelwano sokuqashwa nomsebenzi wakho. Ingabe uhambisa isicelo sokukhansela esinjalo? Lapho-ke isisebenzi sakho sikhululekile ukuzivikela kulokhu futhi sisho ukuthi kungani singavumelani nokuxoshwa noma ukuthi kungani umsebenzi wakho ekholelwa ukuthi kufanele afanele ukuthola umhlomulo wokuyeka umsebenzi. Kuphela lapho zonke izidingo zomthetho sezihlangatsheziwe, iNkantolo yesiFundazwe izoqhubeka nokuqeda inkontileka yokuqashwa.
Kodwa-ke, ngokusebenzisa i- Ukuxoshwa ngokuvuma, ungakugwema ukuya ku-UWV kanye nasenkambisweni phambi kwenkantolo yesifunda futhi ngaleyo ndlela ugcine izindleko. Uma kunjalo, kufanele ufinyelele ezivumelwaneni ezifanele nomsebenzi wakho ngezingxoxo. Uma wenze izivumelwano ezicacile nomsebenzi wakho, izivumelwano ezifanele zizobe zirekhodwa kwisivumelwano sokukhokha. Lokhu, ngokwesibonelo, kungaqukatha umthethonqubo wokuthi iyiphi inkokhelo yokuhlukaniswa komsebenzi yakho ezoyithola nokuthi isigatshana esingaqhudelani siyasebenza. Kubalulekile ukuthi lezi zivumelwano ziqoshwe ngokusemthethweni ephepheni. Kungakho kuwukuhlakanipha ukuthi izivumelwano ezenziwayo zihlolwe ngummeli onguchwepheshe. Ngokusobala, umsebenzi wakho unezinsuku eziyi-14 ngemuva kokusayina ukuze abuyele ezivumelwaneni ezenziwe.
Amaphuzu okumele anakwe uma kwenzeka ukuxoshwa
Ngabe usuthathe isinqumo sokuxosha isisebenzi sakho? Ngemuva kwalokho futhi kuwukuhlakanipha ukunaka lawa maphuzu alandelayo:
Imali Yezinguquko. Leli fomu liphathelene nesinxephezelo esiphansi somthetho okufanele sinqunywe ngokuya ngefomula engaguquki oyikweleta isisebenzi sakho esisebenza unomphela noma esiguquguqukayo lapho uqhubeka nokuxoshwa. Ngokwethulwa kwe-WAB, ukuqoqwa kwale nkokhelo yenguquko kwenzeka kusukela ngosuku lokuqala lokusebenza lwesisebenzi sakho kanye nabasebenzi abangabizi noma abasebenzi ngesikhathi sokuhlolwa nabo banelungelo lokukhokha ushintsho. Kodwa-ke, ngakolunye uhlangothi, ukwanda okwandisiwe kwemali ekhokhelwa ushintsho kubasebenzi bakho abanenkontileka yokuqashwa engaphezu kweminyaka eyishumi kuzokhanselwa. Ngamanye amagama, kuba “eshibhile” kuwe njengomqashi, ngamanye amagama kube lula ukuxosha umsebenzi ngenkontileka yokusebenza isikhathi eside.
Isinxephezelo esifanele. Ngaphezu kokukhokhwa kwenguquko, njengesisebenzi, ungahle futhi ukhokhe imali ethe xaxa yokwehlisa isisebenzi sakho. Lokhu kuzokwenzeka ikakhulukazi uma kunesenzo esibi kakhulu ohlangothini lwakho. Ngokomongo walesi senzo, isibonelo, ukuxoshwa kwesisebenzi ngaphandle kwesizathu esizwakalayo sokuxoshwa, ubukhona bokusatshiswa noma ukubandlululwa. Yize isinxephezelo esifanele singesona esingafani, sithinta kuphela amacala akhethekile lapho inkantolo izokhipha lesi sinxephezelo esifanele kumqashwa. Uma inkantolo iklomelisa umsebenzi wakho ngesinxephezelo esifanele, izophinde inqume inani ngesisekelo sesimo.
Isikweletu sokugcina. Ekupheleni kokuqashwa kwakhe, umsebenzi wakho unelungelo lokukhokhelwa kwezinsuku zeholide ezihlanganisiwe. Zingaki izinsuku zeholide umsebenzi wakho anelungelo lazo, kuncike kulokho okuvunyelwene ngakho kwisivumelwano sokuqashwa futhi mhlawumbe ne-CLA. Amaholide asemthethweni lapho umsebenzi wakho anikezwe ilungelo kunoma yisiphi isimo anezikhathi eziphindwe kane kunenani lezinsuku zokusebenza ngesonto. Ezansi kolayini, kufanele ukhokhele isisebenzi izinsuku zeholide eziqongelelwe, kepha ungakathathi. Uma umsebenzi wakho naye enelungelo lokuthola inyanga yeshumi nantathu noma ibhonasi, la maphuzu kufanele futhi kuxoxwe ngawo esitatimendeni sokugcina bese ukhokhelwa nguwe.
Ingabe ungumqashi ohlose ukuxosha umqashwa wakho? Bese uxhumane Law & More. Kuzo Law & More siyaqonda ukuthi izinqubo zokuxoshwa azinzima kuphela kepha futhi zingaba nemiphumela emibi kuwe njengomqashi. Kungakho sithatha indlela yomuntu siqu futhi ngokubambisana singahlola isimo sakho namathuba. Ngesisekelo salokhu kuhlaziywa, singakweluleka ngezinyathelo ezilandelayo ezifanele. Siyajabula futhi ukukunikeza izeluleko nosizo ngesikhathi senqubo yokuxoshwa. Unemibuzo mayelana nezinsizakalo zethu noma mayelana nokuxoshwa? Ungathola eminye imininingwane ngokuxoshwa kanye nezinsizakalo zethu kusayithi lethu: Ukuxoshwa.site.
Thumela Previous Umonakalo uthi: yini okudingeka uyazi?
Post Next Liyini irekhodi lobugebengu?